ရွှေပေါက္ကံမြို့နယ်က ဆင်ဖုန်ရွာကို ဇွန်လ ၁၂ ရက်နေ့က လူအင်အားငါးရာလောက်က ဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးရာမှာ ကျေးရွာသားတွေ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ခိုလှုံနေရစဉ်
ရန်ကုန်မြို့ ရွှေပေါက္ကံမြို့နယ်က ဆင်ဖုန်ရွာကို ဒီနေ့ လူအင်အားငါးရာလောက်က ဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးရာ မှာ ကျေးရွာသားတွေနဲ့ အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပြီး ဒဏ်ရာပြင်းထန်တဲ့ ကျေးရွာသား လေးဦး ကို မြောက်ဥက္ကလာဆေးရုံမှာ တင်ထားရပါတယ်။
ဒီနေ့ မနက်က ဆင်ဖုန်ရွာကို ဝင်ရောက်အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆင်ဖုန်ရွာသား ကိုအောင်ကျော်က အခုလို ပြောပါတယ်။
"ဆင်ဖုန်ရွာကနေပြီးတော့ ဘုန်းကြီးကျောင်းကို ကျနော်တို့လည်း ခွေးပြေးဝက်ပြေး ပြေးလာရပါတယ်၊ အဲ့ဒီမှာ အခုတ်ခံရတဲ့သူတွေလည်း အခုတ်ခံရပြီးလဲနေပါတယ်ခင်ဗျ၊ ကျနော်တို့လည်း မဆွဲနိုင်ဘူး၊ ပထမ သူတို့က ကျနော်တို့ အိမ်တွေကိုနင်းတဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ လူအင်အားပြပြီးတော့ အဓမ္မစက်ယန္တရားတွေနဲ့ဝင်ပြီးတော့ ဖျက်ပြီးသားအိမ်တွေကို ပြန်ကြိတ်ပါတယ်ခင်ဗျ၊ ခြံစည်းရိုးတွေခတ်ပါတယ် ကျနော်တို့ရွာသားတွေ စုပြီးတော့ ကြည့်နေပါတယ်၊ ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာ လူမိုက်တွေက အနောက်ဘက်ကနေ ကားတွေနဲ့ဆင်းလာ ပြီးတော့ အော်ပြီးတော့ဝင်လာပါတယ်ခင်ဗျ၊ ကုန်းသီးတွေနဲ့ ပစ်ပါတယ်ခင်ဗျ၊ ဝါးတွေနဲ့ ကျောက်စရစ်ခဲတွေနဲ့ ကျနော်တို့ ပြန်ပစ်ပါတယ်ခင်ဗျ၊ ပြန်ပစ်တော့ သူတို့က အင်အားများတော့ မနိုင်ပါဘူးခင်ဗျ၊ မနိုင်တော့ ကျနော်တို့ကို ဓါးတွေနဲ့လည်းခုတ်ပါတယ်ခင်ဗျ၊ ပြေးတဲ့လူလည်း ပြေးပါတယ်"
ဆင်ဖုန်ကျေးရွာဟာ ဇေကမ္ဘာကုမ္ပဏီပိုင်ဆိုင်တဲ့ မြေနေရာမှာလို့သိရပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၇ နှစ်လောက်က အဲ့ဒီမှာနေထိုင်ခဲ့သူတွေကို ရွှေပေါက္ကံ ၁၁ ရပ်ကွက်ကို မြေနေရာတွေဝယ်ခိုင်းပြီး ပြောင်းရွှေ့ဖူးပါတယ်။
လက်ရှိကျန်နေသူတွေက ပြောင်းရွှေ့စဉ်မှာ မပါသူတွေနဲ့ နောက်ထပ်အခြေချ နေထိုင်သူတွေလို့ ဆင်ဖုန်ရွာက ဆရာတော်ဦးသုဇာတကမိန့်ပါတယ်။ မနေ့ကလည်း အလားတူတိုက်ခိုက်ပြီး အိမ်တွေကို လူ ၂ ရာလောက်က ဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ ဆင်ဖုန်ရွာက အိမ်တွေပျက်စီးကုနု်တာကြောင့် ကျေးရွာသား လေးရာနီးပါးလောက် ဟာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှာ ခိုလှုံနေရပါတယ်။
ဘာသာလူမျိုးပဋိပက္ခပြေ ငြိမ်းရေး ဆောင်ရွက်မယ် လို့ မြန်မာ ကာဒီနယ် ပြောဆို
ဘာသာရေး ပဋိပက္ခ သတိပြု ဖို့ မြန်မာ ကက်သလစ် ဆရာတော်ကြီး သတိပေး
မြန်မာမှာ ဘာသာရေးပဋိပက္ခတွေ ထပ်ဖြစ်လာမှာ ကုလ စိုးရိမ်
ပဋိပက္ခသတင်းရယူ တင်ပြမှု မြှင့်တင်ရေး ဆွေးနွေး
မိတ္ထီလာပဋိပက္ခ ဒုက္ခသည် များအား နေအိမ်အလုံး ၃၅၀ လွှဲအပ်
စစ်တွေ ဒါးပိုင်မွတ်စလင် ဒုက္ခသည်စခန်း ပဋိပက္ခ တစ်ဦးသေဆုံး
မန္တလေးမြို့ပဋိပက္ခအမှု ပတ်သက်သူများ စတင် စစ်ဆေး
Jun 17, 2015 01:48 PM
မင်းမဲ့ တိုင်းပြည် ဆိုတာ ဒီလို နေမှာပဲ။ ရဲတပ်ကိုလဲ ဘယ်သူမှ မကြောက်ဘူး။ အစာကောင်းကောင်း ခွံ့များ ထားသလား မသိ။
Jun 15, 2015 03:06 PM
နေရပ်- ဒီ ငပဲ
“လပတ်နီ” ခရိုနီတွေ ပေါ်ထွန်းပြီး
“လပတ်နီ” ရဲတွေမွေး ၊
“လပတ်နီ” စွမ်းအင်ရှင်တွေနဲ့ ပြည်သူတွေကို အနိုင်က ျင့်တာပေါ့။
Jun 15, 2015 03:42 PM
Those people who try to take the land of real Burmese by force, should go and take the land of Chinese who have builtanice village in Burmese territory in northern Burma and estern Burma. I do not understand why Burmese are torturing Burmese people. Burma must bealand for Burmese. It is sad to hear such an incidence. If we don't love our own people, who will? If we don't take care of our own people, who will? The people who is destroying Burmese society, must not be Burmese and also those people should not be unpunished in history. Long live the Burmese!
Jun 15, 2015 02:53 PM
in Myanmar...the main issue is unfair government and crony treat the people like their enemy whenever they want...and stupid gangster act...
Jun 14, 2015 02:02 AM